Ọkara Blackout Manufacturers & Suppliers - China Ọkara Blackout Factory
Ọnụ ala Zebra na-eme ka ákwà dị ala na agba nkịtị
Zebra kpuru ìsì Fabric
A makwaara ákwà mkpuchi Zebra dị ka akwa ákwà mkpuchi, akwa egwurugwu na-ekpuchi ákwà, na-ekpuchi akwa mkpuchi mkpuchi, yana akwa mkpuchi mkpuchi abụọ ma ọ bụ akwa mkpuchi abụọ, sitere na South Korea ma bụrụkwa ndị a ma ama na mba ụwa. Ọ bụ ụdị akwa ọ bụghị naanị na-ejikọ uru nke akwa na ntupu, mana ọ na-ejikọkwa ọrụ nke blinds blinds, roller blinds and Roman blinds.I na-ejikarị ya n'ụlọ, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ụlọ nri, obodo, ụlọ ọrụ dị elu na ndị ọzọ ebe.
E jiri ya tụnyere ọtụtụ zebra blinds fabric na ahịa, ọdịdị nke Groupeve zebra blinds fabric dị mma nke ukwuu, na ọrụ ahụ dị mfe.
Ihe ndozi nzuzo nke China nke Zebra Blind For Window Window Screen
Ndị isi ojii Zebra, nke a makwaara dị ka ndị na-ahụ maka egwurugwu, ndị kpuru ìsì, ndị na-ekpuchi ihu abụọ, ndị isi ehihie na abalị, wdg, sitere na South Korea ma bụrụkwa ndị a ma ama na mba ụwa. Obosara nke windo zebra na-ekpuchi ákwà bụ 3m, ihe a bụ 100% polyester.
Nlekọta na nhicha nke Groupeve zebra blinds fabric bụ dị n'okpuru:
3. Jiri akwa dị nro ma ọ bụ sponge moistened na mmiri ọkụ hichaa ákwà mgbochi n'oge a na-ewepu uzuzu / sterilaiz. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, enwere ike ịgbakwunye ncha dị nro. Hichaa nwayọ iji gbochie ndọlị ma ọ bụ mebie akwa ahụ. Ihichapu nwere ike ime ka ákwà mgbochi ahụ dị ọcha.
4. Jiri ígwè uzuoku fesaa n’ebe dị ihe dịka 10 cm site na ákwà mgbochi akwa ahụ, nke nwere ike ịnwe mmetụta nke iwepu uzuzu / ịga ụlọ.
China Factory Tụkwasịnụ Zebra Blinds Fabric Na Mpi Mpi
A na-akpọkwa ákwà mkpuchi Zebra dị ka akwa ákwà, akwa egwurugwu na-ekpuchi ákwà, na-ekpuchi akwa mkpuchi na-acha uhie uhie, na akwa mkpuchi abụọ na-ekpuchi akwa ma ọ bụ akwa mkpuchi abụọ. Ọ bụ ụdị akwa a kpara site na obere mpempe akwụkwọ nwere otu obosara na ntupu dị iche na ibe ya.
E jiri ya tụnyere ọtụtụ zebra blinds fabric na ahịa, ọkụ na-agbanwe agbanwe bụ uru dị ukwuu nke Groupeve Zebra Blinds Fabric, nke nwere ike izute mkpa nke ọnọdụ ọkụ dị iche iche, n'otu oge ahụ, ọdịdị ahụ dịkwa mma, na ọrụ ahụ dịkwatụ mfe.
Bọchị ehihie na abalị abalị akwa abụọ na-ekpuchi ákwà maka ụlọ
Sheer Shades rickwà
Igwe mkpuchi, nke a makwaara dị ka blind zebra blinds, blinds blinds, double-layer roller blinds, day and night blinds, rainbow blinds, wdg, sitere na South Korea ma bụrụkwa ndị ama ama na mba ụwa. Ọ na ọtụtụ-eji n'ụlọ, hotels, ụlọ oriri na ọ hotelsụ ,ụ, Villas, elu-ọgwụgwụ ụlọ ọrụ ụlọ na ebe ndị ọzọ.
1. Agụụ agụụ na mwepụ ájá.
2. Jiri akwa dị nro ma ọ bụ sponge moistened na mmiri ọkụ hichaa ákwà mgbochi n'oge a na-ewepu uzuzu / sterilaiz. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, enwere ike ịgbakwunye ncha dị nro. Hichaa nwayọ iji gbochie ndọlị ma ọ bụ mebie akwa ahụ. Ihichapu nwere ike ime ka ákwà mgbochi ahụ dị ọcha.
Europeandị European Rainbow Blinds Fabric 100% Polyester
Egwurugwu kpuru ìsì Fabric
Egwurugwu na-ekpuchi anya, nke a makwaara dị ka zebra blinds, blinds blinds, double-layer roller blinds, day and night blinds, wdg, sitere na South Korea ma bụrụkwa ndị a ma ama na mba ụwa.
Dị ka anyị niile maara, na shading mmetụta nke egwurugwu blinds ákwà na-tumadi kpebisiri ike site na ihe onwunwe. Dabere na njirimara nke akwa ahụ, enwere ike kewaa ya na ọkara oji egwurugwu na-ekpuchi ákwà na akwa ojii.
Nhọrọ nke ihe mkpuchi na-adabere na ọnọdụ eji. N'agbanyeghị ụdị nke ịchọrọ, anyị nwere ike ịnye ndụmọdụ kacha mma na nlele.
Factory Hot Ree Dual Sheer ala Blinds Fabric N'ihi Office
Sheer Roller Blinds Fabric
Ihe nkpuchi ala, nke a makwaara dị ka zebra blinds, blinds blinds, double-layer roller blinds, day and night blinds, rainbow blinds etc., sitere na South Korea ma bụrụkwa ndị a ma ama na mba ụwa. Ngwongwo nke ihe nkpuchi na-ekpuchi ákwà bụ 100% polyester.
Ọ nwere ike ọ bụghị naanị nweta mmetụta nke shading, kamakwa mezuo ihe a chọrọ nke ọkụ mgbe ndị mmadụ na-arụ ọrụ. Ọ na ọtụtụ-eji n'ụlọ, hotels, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, Villas, elu-ọgwụgwụ ụlọ ọrụ ụlọ na ebe ndị ọzọ.We nwere ihe karịrị 200 ihe anyị n'oké ala ala blinds ákwà sample broshuọ, ị pụrụ ịchọta gị ezigbo agba na ya.
Ogologo Oge Ehihie na Abalị na-ekpuchi ákwà 100% Polyester
Ehihie na Abali kpuru ìsì Fabric
A na-akpọkwa ákwà kpuchie ehihie na abalị dị ka akwa na-ekpuchi ákwà mkpuchi, akwa ákwà na-ekpuchi ákwà, akwa egwurugwu na-ekpuchi ákwà, na-ekpuchi akwa mkpuchi na-acha uhie uhie, na akwa mkpuchi abụọ na-ekpuchi akwa ma ọ bụ akwa mkpuchi ihu abụọ.
Ihe mkpuchi ehihie na abalị bụ mkpuchi abụọ. Ya dimming na-enweta site na interlacing nke ákwà oyi akwa na ntupu oyi akwa. Mgbe ntupu mkpuchi jikọtara ọnụ, ìhè dị nro ma belata ọkụ kpọmkwem ruo oke ụfọdụ. Mgbe akwa akwa ahụ jikọtara, a na-egbochi ọkụ kpamkpam, ka o wee gbochie ọkụ ahụ. A na-eme ákwà mkpuchi ụbọchị niile na ehihie nke 100% polyester, anyị nwere asambodo maka akwa niile.
Ọnụ ọgụgụ dị elu Zebra Shade Fabric 100% Polyester
Zebra Ikebe Fabric
A na-amarakwa ákwà mkpuchi Zebra dị ka akwa ákwà, akwa egwurugwu na-ekpuchi ákwà, na-ekpuchi akwa mkpuchi na-acha uhie uhie, na akwa mkpuchi abụọ na-ekpuchi akwa ma ọ bụ akwa mkpuchi ihu abụọ. Dika njirimara nke akwa ahu, enwere ike kewaa ya na akwa ojii oji na akwa oji.
Ọ na ọtụtụ-eji n'ụlọ, hotels, ụlọ oriri na ọ hotelsụ ,ụ, Villas, elu-ọgwụgwụ ụlọ ọrụ ụlọ na ebe ndị ọzọ. N'ime oghere ghere oghe dịka ime ụlọ na ebe a na-amụ ihe, ọ bụrụ na ihe ndò chọrọ adịghị elu, ị nwere ike ịhọrọ elekere ojii black zebra blinds. Ọ bụrụ na ọ bụ ime ụlọ ihi ụra ma ọ bụ ọnụ ụlọ a na-ahụ anya nke na-achọ nkedo dị elu, ị nwere ike ịhọrọ black zebra blinds.
Ọ nwere mmetụta dị ike atọ ma na-ekpo ọkụ nke ukwuu. Mgbe emechiri ìsì, ị nwere ike ile anya n'èzí ma ìhè na-abanye n'ime ụlọ ahụ dị nro ma dị mma.
Mgbe emechiri ákwà mgbochi ahụ, a na-anọpụ ya iche site na mpụga, na-achọpụta nzuzo ma gosipụta ịdị mfe na ịdị mma nke egwurugwu na-ekpuchi.
Ngwurugwu egwurugwu anyị na-ekpuchi ákwà bụ nhọrọ kachasị mma maka egwurugwu na-ekpuchi ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị na-ere ahịa. Anyị nwere ike ịnye ihe nlele n'efu nke egwurugwu na-ekpuchi ákwà maka ndị ahịa anyị. Mpịakọta ọ bụla nke egwurugwu na-ekpuchi ákwà ga-agabiga ule dị mma tupu ebupu.
Multi-acha Zebra Fabric 100% Polyester N'ihi Villas
A na-akpọ ákwà Zebra dị ka akwa ákwà mkpuchi, akwa egwurugwu na-ekpuchi ákwà, na-ekpuchi akwa mkpuchi na-ekpuchi anya, na akwa mkpuchi abụọ na-ekpuchi akwa ma ọ bụ akwa mkpuchi abụọ. Dika njirimara nke akwa ahu, enwere ike kewaa ya na akwa ojii oji na akwa oji.
N'ime oghere ghere oghe dịka ime ụlọ na ebe a na-amụ ihe, ọ bụrụ na ihe ndò chọrọ adịghị elu, ị nwere ike ịhọrọ elekere ojii black zebra blinds. Ọ nwere ike ọ bụghị naanị nweta mmetụta nke shading, kamakwa mezuo ihe a chọrọ nke ọkụ mgbe ndị mmadụ na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ọ bụ ime ụlọ ihi ụra ma ọ bụ ọnụ ụlọ a na-ahụ anya nke na-achọ nkedo dị elu, ị nwere ike ịhọrọ black zebra blinds. N'agbanyeghị nke ị masịrị ịhọrọ, anyị nwere ike ịnye ndụmọdụ kacha mma na nlele.
New Style Rainbow Blinds Fabric Semi-Blackout
Egwurugwu na-ekpuchi anya, nke a makwaara dị ka zebra blinds, blinds blinds, double-layer roller blinds, day and night blinds, wdg, sitere na South Korea ma bụrụkwa ndị a ma ama na mba ụwa. Ọ bụ ụdị akwa a kpara site na obere mpempe akwụkwọ nwere otu obosara na ntupu dị iche na ibe ya. Ọ nwere mmetụta dị ike atọ ma na-ekpo ọkụ nke ukwuu. Ihe egwurugwu na-ekpuchi ákwà bụ 100% polyester.
E jiri ya tụnyere ọtụtụ egwurugwu na-ekpuchi anya na ahịa, ọkụ na-agbanwe agbanwe bụ uru dị ukwuu nke Groupeve Zebra Blinds Fabric, nke nwere ike izute mkpa nke ọnọdụ ọkụ dị iche iche, n'otu oge ahụ, ọdịdị ahụ dịkwa mma, na ọrụ ahụ dịkwa mfe.
Ogo nkwa Ogologo oge Zebra Fabric 100% Polyester Semi-Blackout
A na-akpọkwa ákwà mkpuchi Zebra dị ka akwa ákwà, akwa egwurugwu na-ekpuchi ákwà, na-ekpuchi akwa mkpuchi na-acha uhie uhie, na akwa mkpuchi abụọ na-ekpuchi akwa ma ọ bụ akwa mkpuchi abụọ. Dika njirimara nke akwa ahu, enwere ike kewaa ya na akwa ojii oji na akwa oji.
Ọ bụghị naanị na-ejikọ uru nke akwa na ntupu, mana ọ na-ejikọkwa ọrụ nke ndị na-ekpuchi venetian, ihe mkpuchi ala na ndị ìsì ndị Rom. Ọ na ọtụtụ-eji n'ụlọ, hotels, ụlọ oriri na ọ hotelsụ ,ụ, Villas, elu-ọgwụgwụ ụlọ ọrụ ụlọ na ebe ndị ọzọ.